Idivayisi ye-iPhone 4: kanjani ukuvula?
Abasebenzisi abaningi begajethi ye-apula babhekene nokuphazamiseka okuhlukile, okungaphezu kokucasula ikhwalithi yamadivayisi. Enye yezinkinga ezinjalo zingase zibophezele opharetha. Ngokuvamile lokhu kwenzeka uma uthenga idivaysi esuka eMelika. Uma emva kokuthenga awukwazi ukusebenzisa ngokugcwele zonke izici ze-iPhone 4 yakho, ukuyivula kanjani - iba inkinga enkulu.
Kungani udinga ukukhiya
Izizathu zokuvala igajethi zingase zibe ezimbalwa, kodwa ngokuvamile abasebenzisi babhekana nazo ezimbili:
Ukuvimbela ukusetshenziswa komsebenzisi oyedwa.
Setha indawo nge iTunes uma ulahlekelwa ifoni yakho.
Okuvamile kakhulu icala lokuqala, kusukela lapho amagajethi aseMelika ayevame ukuthengiswa ku-AT & T salon ngesipho esikhethekile. Kulesi simo kuyindlela elula yokumaketha, okuyinto elula kulabo abanelisekile ngekhwalithi yamasevisi alo mqhubi.
Abahlaseli emhlabeni jikelele baye baqeda ubuchopho babo indlela yokuvimbela lolu hlobo lokuvimba. Manje izindlela eziningi ziyaziwa. Isibonelo, ukusetshenziswa kwe-jailbreaking. Lezi zikhishwe nge-firmware ngesinye isitolo sesicelo esingavunyelwe yi-Apple Inc. Lapho ungathola izinsiza eziningi eziwusizo. Kunezinye izindlela zokuvula, sizoxoxa ngazo zonke izindlela ngokuningiliziwe ngezansi.
Enye indlela yokuvula uMichael Kapoczy
Ngokuvamile kunenkinga ye-iPhone 4: indlela yokuyivula futhi kungabe kungenzeka yini ukusebenzisa igajethi ngokuqhubekayo. I-hacker esuka ku-Chronic Dev Team ithola isisombululo kule nkinga. Njengoba kulandela ividiyo eposwe kwi-portal ethandwayo "i-Youtube", wakwazi ukuqala ukusebenzisa ikhadi le-SIM le-T ngemizuzu embalwa nje. Kodwa-ke, umuntu angakwazi ukuphawula ngokushesha indlela ephawulekayo yalendlela - kuyadingeka ukuba ube ne-SIM khadi ye-AT & T opharetha (uma i-lok ihlala kuyo).
Ngenkathi kungekho ukubuyekezwa, ingabe le nguqulo ehlongozwayo ixazulula inkinga yokukhiya ngokusebenzisa ama-sim amakhaya kwamanye amazwe, kodwa abasebenzisi abaningi bazama. Ukuvinjelwa kutholakala ngokuthi "ukukhohlwa" inethiwekhi yokuqala. Nokho, ngemuva kokuvuselela kabusha, usaphinda udinga ukuxazulula inkinga yokuvula i-iPhone 4. Lokhu akusizi, ngoba ngezinye izikhathi asikho isikhathi sokwenza i-algorithm. Ngeke sichaze le ndlela ngokuningiliziwe, ngoba akukho ukuqiniseka ukuthi kuzosebenza. Yiqiniso, abanikazi be- iPhone 4 evinjiwe abalahlekelwa kancane, kodwa musa ukukhulisa isimo. Uma ungaxazululi inkinga, ungavula kanjani i-iPhone 4 ngokwakho, ungaxhumana njalo nezikhungo zesevisi, lapho uzosizwa khona ngempela.
Le divayisi efakwe nge-SIM khadi yakho. I-super-simka kwi-firmware 4.2-4.3 ihloliwe. Inethiwekhi inezibuyekezo eziningi ezinhle ngale ndlela. Yayisetshenziswa eRussia nase-Ukraine futhi kuzo zonke zombili izimo ngempumelelo.
Emva kokuvula ifoni ngamakhadi amasha (awudingi ukuwafaka ngesikhathi esishisayo, uma uvala igajethi akufanele ibe yindiza yendiza), kuzodingeka uvumelane nelayisensi. Emva kwalokho uzobona ukuthi kungenzeka izingcingo eziphuthumayo kuphela . Udinga ukudayela u-112 futhi usethe kabusha kabusha (yenza ngokushesha uma ubona inethiwekhi etholakalayo). Imilayezo eminingana mayelana nokungabikho kokusebenzisa iSIM khadi ingavela. Lokhu kuvamile ngokuphelele, ngemuva kokudayela uzoba nezikhathi eziningana ukuze usebenze imodi yezindiza, ulinde kancane bese uphuma kuwo. Uma inethiwekhi yakho ingatholakali, phinda le nqubo izikhathi eziningana. Uma nje igama le-opharetha yakho livela, inkinga yokuvula i-iPhone 4 ixazululwa.
IPhone 4: Ungavula kanjani nge-SAM
Okokuqala, udinga ukufaka i-jailbreak efonini yakho naku-Cydia ukuthola i-Binger, nakuhlu lwamaphakheji ayo - SAM. Khona-ke udinga ukufaka isicelo kugajethi yakho. Qinisekisa uhlu lokulanda izingxenye futhi ngemuva kokuqedela ukufakwa, yenza iBhodi yokuQala kabusha ye-Spring.
Udinga ukufaka nge-wi-fi. Ngemuva kokuthi uthele igajethi yakho isicelo esisha, faka iSim khadi yakho. Vula izici ze-SAMP. Setha indlela ekutholeni ngokuzenzakalela. Sesha inethiwekhi usebenzisa inkinobho yomsebenzi. Uma leyunithi ingasusiwe ngemuva kwalokhu, bese usetha opharetha ngesandla. Ukuze wenze lokhu, setha uhlelo lokusebenza nge-Country and Carrier bese ukhetha izwe lakho kanye nomthwali wezinkampani kusuka kuhlu oludonsela phansi . Okulandelayo, kuzodingeka ukuthi kusebenze idivayisi yakho ngezilungiselelo ezintsha.
Yini okufanele ngiyenze uma ngishintsha i-firmware ku-iOS 7.1.2
Abaningi kulabo abaye bakwazi ukuxazulula inkinga ye-iPhone 4 (indlela yokuvula) kwi-firmware ye- iOS 6, emva kokubuyekezwa, balindele ukumangala okungathandeki. Ifoni yeka ukusebenza nenethiwekhi iphinde idingeke ukuyivula. Ungasize i-jailbreak futhi uphinde uguqule izinguquko ze-firmware, njengalokhu lonke uhlelo lokusebenza lokusebenza inguqulo yesofthiwe ye-modem ibuyekeziwe futhi ukuphindaphindiwe akukwenziwa.
Ukuvula ngokuzimela iPhone 4 IOS 7.1.2 ingasebenzisa i-GEVEY-SIM. Le ndlela ivikelekile kakhulu, futhi awulahlekelwa lutho. Uma ungeke ukwazi ukwenza lokhu nge-patch, kufanele uxhumane namakhosi we-service centre. Bangakwazi ukuvula ngokushesha futhi ngokuncintisana. Yilokho lonke ulwazi esikufunayo ukwabelana kulo magazini.
I-LG Optimus G E975: izinkomba, ukubuyekezwa, umhlahlandlela womsebenzisi, ukubuyekezwa
I-Sony Xperia M2 D2303: izibuyekezo nezici zokubuyekeza
Iyini i-smartphone enekhamera engcono kakhulu? I-Top-10
Ukusebenza kwe-Sony Xperia X: Ukubuka kanye Nezici zeModeli
I-Nokia 5228: Izici nezici
Khetha inflatable yokubhukuda nge-slide izingane
Kungani tailbone ubuhlungu ngesikhathi sokukhulelwa
Beautiful izithelo lisikiwe
I-calcium sulphate. Incazelo
Case ezimonyweni: izici nezinhlobo-accessory esisemqoka
Kusondele kangakanani izihitshela lapho ukunitha izinaliti
I-RPG engcono kakhulu ye-isometric: ukubuyekezwa, izici nokubuyekezwa
Incazelo Ihhotela ezimbi Oliva
UMbuso WaseBrithani esikhathini esibucayi, futhi owokuqala (1583 - 1783)
Azarov Dmitriy Igorevich - the lephalamende kusuka neSamara region
Meatballs e utamatisi sauce: iresiphi elula futhi okumnandi